Iintlobo zoqhagamshelwano ➤ zibonwe kwiNtlanganiso yeHlabathi yeNkundla
Ikhaya » Izaziso » Iincwadana » Iintlobo zoqhagamshelwano ➤ zibonwe kwiNtlanganiso yeHlabathi yeNkundla
18 / 07 / 2019 08 / 06 / 2019 yi Antonio Gancedo
Intlanganiso yoHlangano lweHlabathi ye-II yeHlabathi iNkqantosi yoXolo kunye noThathozo
I-20 ka-Ephreli ye-2019 yayibhiyozelwe ngeendlela eziqhelekileyo, isebenzisa inkqubo yee-enconferensi ZOOM ukuhlalutya iintlobo zoqhagamshelwano ngelizwe kwintlanganiso yokuqala Ihlabathi leMatshi yesi-2 ngoxolo noKhuseleko.
Inani elipheleleyo lamazwe e-44 athathe inxaxheba kwiindawo zokudibanisa kunye / okanye uthumele iingxelo.
Kuye kwaxoxwa ngazo iintlobo zoqhagamshelwano kwiintlanganiso:
Imeko yamazwe kunye nokuchaneka kwamakhalenda.
Ezihlukeneyo: IWeb, iTelegram, iRRSS, njl
Abathathi-nxaxheba beendawo kunye / okanye ukuthumela ingxelo:
Yurophu: ESpeyin, eJamani, e-Ireland, eBelgium, eFransi, eSwitzerland, eSlovenia, eBosnia H, eCroatia, eSerbia, eGrisi, e-Itali naseVatican.
Afrika: Morocco, Mauritania, Senegal, iGambia, iMali, iBenin, iTogo, iNigeria, iDongo laseCongo.
Melika: ECanada, eMexico, eGuatemala, eHonduras, eBelize, e-El Salvador, eCosta Rica, ePanama, eColombia, eVenezuela, eSuriname, eBrazil, e-Argentina, e-Ecuador, ePeru, eBolivia, e-Chile.
Asia, Oceania naseAustralia: Iraq, Japan, Nepal, India, Australia.
iyonke: Amazwe e-44.
Injongo yokuba nemisebenzi ekuqaleni kumazwe akwa-75 enezi193.
1 I-Spain: iMadrid-Sevilla-Málaga-Cádiz
1.1.1 I-28 okanye i-29 kaSeptemba: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
1.1.2 Izixhobo zokufumana iMarches ePaza okanye ePaza España okanye kwiCibeles
1.1.3 Ukususela kwi-1 ukuya ku-Oktobha 20 (iintsuku ze-20)
1.1.4 Ezinye izinto ezicwangcisiweyo
1.2.1 2018. Ukunikezelwa kweMatshi kaHlabathi kwi-As. Abavakalisi baseFeans, iColic Library yaseMontalto, iThala leCastrillón, njenge-Forum Popolis
1.2.2 2019. Ukunikezelwa kweMatshi kaHlabathi kwi-Centre ye-Os Mallos Centre
2 IAfrika: amazwe ali-17 - izixeko ezingama-24
2.2 I-Spain: iGran Canaria, iTenerife, Fuerteventura.
2.2.1 Oktobha-2019: Ukuhamba kweHlabathi leMatshi kwiiCanary Islands.
2.7 EBenin naseTogo
2.9 Republic of Democratic Republic of Congo
2.10 Amanye amazwe aseAfrika
2.10.1 Ulwazi lithunyelwa kumazwe alandelayo
3 IMelika: amazwe angama-22 - izixeko ezingama-85
3.1.1 Isimemo kunye neendidi zokulungelelaniswa zithunyelwe kwiininzi zamaqela okuzithandela kuloo mzi.
3.2 EUnited States
3.2.1 KwiZizwe eziManyeneyo
3.4.1 Sinamacandelo ahlukeneyo amelwe
3.4.2 Ukuphononongwa kweentlobo zokulungelelaniswa kwendlela yeBakala leBakala
3.4.3 Izenzo zokuphumeza emva komcimbi wokhetho
3.6 El Salvado
3.8 icosta Rica
3.8.1 Ingxelo yenkcubeko yenkcubeko ye-World World yesiKwindla nguRhulumente
3.10.1 IBarrancabermeja (E. uMgqugquzeli ophethe u-Anthony noMelba)
3.10.2 I-Medellín (E. Umgqugquzeli ophethe uElex noGloria)
3.10.3 I-Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-i-Armenia-Neiva (iidolophu ze10)
3.11.1 Guayaquil kunye nokuthatha inxaxheba kwiintlobo zoqhagamshelwano
3.11.2 Ibhentshi nale mi sebenzi
3.12.1 Umyalezo waseVenezuela
3.14.1 Imisebenzi kwilizwe
3.14.2 Iqela loPhuculo lweNgingqi
3.14.3 Iiplati zokuxhasa
3.14.4 KwiZenzo eziMbindi
3.14.5 Iindlela zokuguqula
3.14.6 Ezinye zeZenzo
3.14.7 Iindibano zeNtlalo kunye neMibutho eyaBambisana kunye neNkxaso
3.14.9 Imidiya kunye nokusabalalisa
3.14.10 IiNtlalo zeNtlalo
3.14.11 Iimpawu zokungabikho koLuntu kunye noXolo kwizikali ezahlukeneyo
3.14.12 Ukuhlangula iminikelo yoxolo kunye nokungabi nonyango olufanelekileyo kwilizwe
3.14.13 Nika ukubonakala kwimibango kunye namava anomdla othile kwilizwe
3.14.14 Iimbono ezinamandla kunye nezihloko ezimele ziqiniswe kwilizwe ngokwemiqathango yazo
3.14.15 Uqoqosho kunye nokuzixhasa ngemali
3.15.1 Ukuqhagamshelana namaziko
3.18.1 Kuya kubakho iziganeko ezibini ezinkulu kwilizwe
4 I-Oceania-Australia-iAsia: amazwe asi-7 kwiidolophu ezili-17
4.1 ENew Zealand
4.6 Uhlu lweeKorea ezimbini
4.9.1 Siceba ukwenza le mi sebenzi eNepal
4.9.2 Imisebenzi yeQela leBakala leZibini zeNhlaba ngoMatshi ngo-Nepal
4.9.3 Iqela leBakala liya kuhamba kwenye idolophu xa kunokwenzeka.
4.9.4 Kuya kuba kuhle kakhulu ukuba i-Sudhir ne-Nailesh ibambe iqhaza kwiQela le-Base eNepal
4.10.3 Amanqaku entsebenziswano kwiindidi zoqhagamshelwano kufuneka achazwe ngokubanzi.
5 IYurophu: amazwe angama-29 - izixeko ezingama-57
5.8.1 East-West Road
5.8.2 Umntla weNyakatho yeNtshona
5.8.3 Enye indlela ekhoyo yokuguqula
5.8.4 Iqela leBakala
5.8.5 IMeditera, uLwandle loxolo
5.10 IMeditera: uLwandle loxolo.
5.11 Kwisixeko saseVatican
5.11.1 Ingqungquthela engapheliyo kwiinkomfa ezinxamnye nemfazwe kunye nokungabikho gonyamelo
5.11.2 Ekupheleni kuka-Agasti we-2019, kunye namanye amaqela kunye noluntu
5.11.3 Sithumele incwadi ebhaliweyo kuNobhala weSizwe ukucacisa iintlobo zokucebisa izilungiso
6 Izinto eziphathekayo ukuququzelela iintlobo zokulungelelanisa umhlaba kunye neminye imiba
6.1.1 Uludwe lweelwimi
6.1.2 Sifeza isigaba esiphezulu sewebhu. Emva kokugqiba eli nqanaba siya kusebenza kwisihloko seRRSS.
6.2 IiNtlalo zeNtlalo
6.3 Intlanganiso elandelayo elandelayo ukuxoxa ngale ndlela ilandelayo yokulungelelanisa umhlaba jikelele
El UKUQALA I-2ª Yehlabathi ngoMatshi I-23 okanye i-24 kaSeptemba iya kubanjelwa eMadrid.
Igumbi leNgqungquthela yoNxibelelwano ingaba yeso sakhiwo seCibeles okanye seBakery House. Ubude be12 kwi-14 (2h).
Ukuxhaswa kwe-Mobility kwi-Bicycle Circuit ukuxhasa i-2ª World March kwi-28 ngoSeptemba.
(EBA) Bashiya i-28 / 9 kuma-11 ukusuka eLegazpi kwaye bahamba kwi-Arganzuela, njengokuba benze kwezinye iiminyaka.
I-28 okanye i-29 kaSeptemba: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
Umculo / inkcubeko / umhla wokutya kunye namaqela avela kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi (kukho amaqela ase-Afrika kunye namaMerika aseMerika).
Phakathi kwe-2 kunye ne-8 ka-Oktobha: Iikholeji zoLuntu zeSpeyin. Iphulo lamazwe ngamazwe kwimizi emikhulu eneentlobo ezahlukeneyo zokulungelelanisa umhlaba jikelele
2 ngo-Oktobha: Imvume yokuhamba ukusuka kwiindawo zokuhlala ukuya kwiziko le sixeko, ukuqala kwi-16: 00h:
I-Plaza Atocha -Calle Atocha - uAnton Martin - Plaza de la Provincia - Plaza uSodolophu 1,5 km.
I-Plaza España -Calle Bailen-Calle Sodolophu - Plaza USodolophu 1,4 km.
I-Puerta de Alcalá - Cibeles - Seville - Sol - Calle USodolophu - Plaza USodolophu 1,8 km.
Izixhobo zokufumana iMarches ePaza okanye ePaza España okanye kwiCibeles
18: 30 Ukufunyanwa kweeNqanawa zeeNgingqi. Sidinga isigaba somsebenzi kunye nekhonsathi.
19: 30 ISimboli Sabantu SokuXhaba Noxolo. Indawo ephakamileyo kwisikwere.
20: 30 Imisebenzi yabaculi kunye nekhonsathi yezintlu ezincinci. Amagama anokwenzeka ngamakhonsathi ngendlela ebonakala ngayo: yezilwanyana kunye namaBones, Muerdo, Leonor Watling, Rozalén, Ismael Serrano, Jorge Drexler, i-Langui, iMacaco.
Ukususela kwi-1 ukuya ku-Oktobha 20 (iintsuku ze-20)
Indawo yokubonisa ukubonisa okulandelayo:
Iifoto kunye neevidiyo ze "Matshi weHlabathi".
Iividiyo kunye neefoto "iZimpawu zoLuntu kwiZikolo zaseMadrid".
Iiphaneli "zooThunyi abangaNobundlobongela" uGandhi, ML King, Silo…
Imiboniso yabafazi abaneDayimane ezimbini: "Amanxeba", "Jonga enye indlela".
Ezinye izinto ezicwangcisiweyo
Ukuqaliswa kweMidlalo ye-OCA
I-App ye-2ª yeHlabathi ngoMatshi
Iyunithi yezemfundo kwizikolo ezilandelelweyo ze-2ª kwi-World March
Indawo engenzekayo ukufaka umfanekiso okanye iplani ekukhunjweni kokuhamba kwe-2 kuMatshi.
Siphakamisa indawo ye-El Matadero. Ngokukhethekileyo ngaphezu komnyango wokungena, emva komnyango wePlaza de Legazpi.
Ukuba kwakungenakwenzeka, kwi-plaza ye-Skating Rink Madrid Río.
2018. Ukunikezelwa kweMatshi kaHlabathi kwi-As. Abavakalisi baseFeans, iColic Library yaseMontalto, iThala leCastrillón, njenge-Forum Popolis
ISimboli soBuntu soxolo ku-Cassette for Peace and the Right to Refuge.
Ukusabalalisa iincwadana zeHlabathi ngaphandle kweMfazwe kwi-World March.
Ukuhlolwa kwexwebhu "Tupac Amaru, into itshintshayo" kwi-Bibli. Castrillón.
I-Documentary "I-Samba, igama elichithwe" kwi-As. Vecinal Agra.
Incoko-i-colloquium yezixhobo zeNukliya kwithala leencwadi laseCastrillón.
Ukunikezwa kweeBhunga eziPhezulu zeZenzo ezingekho ngogonyamelo kwi-association Agra. NguRicardo Lucero
2019. Ukunikezelwa kweMatshi kaHlabathi kwi-Centre ye-Os Mallos Centre
UColegio Fernández Latorre (abafundi abangama-600 kunye nabamelwane), iNtetho - ikholloquium "Ukuphuma kubundlobongela, imfuneko yobuqu neyasekuhlaleni" nguPhilippe Moal.
Iworkshop kwi-Non-ugonyamelo kumbutho weForam Propolis.
ISimboli soBuntu soxolo kunye nokufunda kwe-Ethical Commitment Plaza de María Pita (abafundi be-300).
Ukuvunyelwa kwePlaniyali kaMasipala yeSigqeba sokuvuma isivumelwano soMnqophiso weSixhobo seNyukliya.
Iworkshop on Nonviolence kwi-Forum yePolisi yePolpol.
Isibhengezo seZiko leBhunga leSixeko lase-A Coruña elihambelana ne-2ª yeHlabathi iMatshi ngoxolo kunye nokungabikho kobundlobongela kunye nokuvakalisa i-Oktobha 2 njengoSuku lwe-Non-Unolence Active in A Coruña.
Ukunikezwa kweMatshi kaHlabathi kwi-Sphera Academy.
I-Workshop kwi-Non-violence enobudlelwane kwi-Agra.
26 April 2019 Utyando lwaBantu beZikolo zoKhuseleko kunye noKhuselwano kwi-Promenade kunye nokuthatha inxaxheba kumaziko eemfundo ze-8 kunye nabafundi be-3.500.
Meyi 9: Ukunikezwa kweMatshi kaHlabathi kwi-Ventorrillo Neighborhood Association.
6 kaJuni: ukuhlanganiswa kweeninzi kumabutho esi sixeko kwi-Sagrada Familia Social Centre.
21 kwi-23 kaJuni: Yima e-Camping for Peace and Right to Refuge, kunye nama-workshops kwi-Non-violence.
Septemba 5: 2ª umnxeba omkhulu kwimibutho yeso sixeko kwiCiudad Vieja Civic Centre.
Oktobha 2: ISimboli Sokuthula Sabantu kwi-Plaza de María Pita kunye nokuxhamla ukuxhuma kunye nokuqala eMadrid ye-2ª Yehlabathi ye-World March for Peace and Nonviolence
Isiluleko seMpawu zoLuntu zoxolo kwiziko lemfundo zesixeko saseMáis de 3.500 esikolweni sase-A Coruña senza i-cadea yabantu ukuba ifune uxolo kunye ne-amosar ye-rexeitamento.
Indawo yokuRhafu: Isenzo sokubonakala nokuchithwa.
IAfrika: amazwe ali-17 - izixeko ezingama-24
Ngexesha lohambo lukaMartine ngephondo elisempuma yeMorocco kunye nemisebenzi ehlelwe ngokubonga kuMiloud nase-Azzedine.
Abafowunelwa baqulunqwe ngamaqela amaninzi ngaphakathi kwesi sikhokelo sohlobo lwe-coordination global, okufuneka lukhokele kwiziphakamiso zemisebenzi (jonga ingxelo ethunyelwe kuhlu).
Kwiiveki ezimbalwa kuya kuba olunye uhambo oluya eMorocco.
I-Spain: iGran Canaria, iTenerife, Fuerteventura.
Oktobha-2019: Ukuhamba kweHlabathi leMatshi kwiiCanary Islands.
Ukusebenzisa inqaku leSibini yeHlabathi ngeMatshi yesihlanu apha, siya kukhuthaza oko kuza kuba yi-1st Canary Forum of Education for Peace.
Iquka ukubandakanya amaziko emfundo amaninzi nokuqinisekisa ukuqhubeka kwabo.
Inomdla kukuba, kwikamva, iya kuba yintlanganiso yabo bonke abanomdla ekuqhubekeni kokupheliswa kwazo zonke iintlobo zobundlobongela kwimfundo.
Iintlanganiso zangempela ze-3 ziye zathatha inxaxheba.
Balindele ukuchaza imisebenzi ekhonkrithi.
E-Dakar, i-Keba i-DIOP idibene nezikolo ezintathu kwaye inenjongo yokuzihlanganisela usuku lokungabikho kobundlobongela apho benza imiqondiso yabantu.
Ukusasazeka kwenziwa kwezinye izikolo ezizimeleyo apho kulungiselelwa khona umboniso.
Iphinda ihlolisise ukuba kukho ikhonsathi kunye nophawu lomntu olukhulu loxolo.
Abanye abathathi-nxaxheba: Ndiaga DIALLO Association Diretti humani, Cheikh DIOP, Samba X Théâtre sensibilisation, Papis BADJI.
UMartine uqale ukusasaza le projekthi kubafundi abatsha.
Baye bathatha inxaxheba kwingxoxo. Inkcazelo enemiqathango yemisebenzi kwiintlobo zoqhagamshelwano. Mamut Jange
Ikhomishini yokuqaliswa kweSibini yeHlabathi yeKhasi yenziwe.
Lo msebenzi obalulekileyo usivumele ukuba sibe nombono ocacileyo weenjongo esizibekele zona:
Lungiselela ukhuphiswano lwebhola ekhatywayo olubizwa ngokuba "LUXANDUVA LOKUZIPHATHA KAKHULU".
Oku kuya kuvumela amaqela aseBenin neTogo ukuba ancintisane neenyanga ezimbini ukuguqulwa kwamazwe amabini kunye nokuphakamisa ulwazi malunga nemigqaliselo yezenzo ezingenabundlobongela.
Fumana izikolo ezaneleyo kwaye ulungiselele imidlalo. Siza kuceba amanyathelo okutsala abantu abaninzi.
Ukuhlaziya amajelo eendaba ukuze bazinikezele iindawo zokusasaza okungengobundlobongela kunye nezenzo ezimele zenziwe ukuhlakulela uxolo kwihlabathi.
Vala le ndwendwe ngomsebenzi odlalwayo kunye nabaculi abamenyweyo kunye nokuzaliswa kweempawu zokhuseleko eziza kuba ziphambili kuthi.
Qaphela: Sithanda ukulungelelaniswa kwehlabathi lonke kwi-World World March ukulungiselela umsebenzi wethu entsimini ukusinceda ukuba:
Amaxwebhu asemthethweni esiya kubonisa ukuba kuyimfuneko ukwenzela ukuba singadibanisi indlela yethu kunye nokuphazamiseka komgaqo-karhulumente, ekubeni onke amazwe aphikisana kunye nabasemagunyeni basolisa yonke into.
Thumela ileta kwiphondo ngalinye ukuchaza le projekthi.
Fumana izixhobo eziyimfuneko ukuphumeza olu hambo.
Ngovuyo olukhulu siye sawamkela le projekthi ehloniphekileyo esiyifuna ukuyiphumelela.
Sifuna kwakhona ukuthunyelwa kwamazwe ngamazwe ukuya eBenin naseTogo.
Silindele ukuqinisekiswa ukuba simemezele ikhalenda yezenzo ezahlukeneyo zenze isigqibo kulo mhlaba jikelele.
Injongo ithi oonxibelelwano sele sele esungulwe kunye noLutsha lweSizwe loMzantsi Afrika kunye neminye imibutho ukulungiselela ngokubambisana isiganeko e-Abuja.
Icela uhlobo loxwebhu olusemthethweni kwiindidi zokuqhagamshelana ngamazwe ukulungiselela ukunxibelelana nabasemagunyeni.
Lubumbashi UPaulin KASANGU.
Uthathe inxaxheba kwingxoxo kwaye wathumela la mazwi malunga neCongo DRC:
E-Congo, akukho uxolo loqobo okanye imfazwe yangempela. Esi sisiseko esihle kubo bafuna ukwakha imfazwe.
Kwakhona sisisiseko esihle kuthi sifuna ukwakha uxolo.
Ngokubhekiselele kwi-2ª Yehlabathi ka-Matshi, abantu abathembisa ukuncedisa izinto abaziphathekayo abazigcineli izithembiso zabo.
Nangona kunjalo, qi niseka ukuba idatha (ebhaliweyo + imifanekiso) iya kuthunyelwa ngokuqhelekileyo ubuncinane kwisixeko saseLubumbashi.
Siyathemba ukuba ezinye iidolophu zaseCongo zingadibana nathi.
Amanye amazwe aseAfrika
Ulwazi lithunyelwa kumazwe alandelayo
IMozambique: Ulwazi lithunyelwa kubo. Remigio CHIALAUE axhunyiwe
I-Kenya: Baye bathatha inxaxheba kwingxoxo. Bathunyelwa ulwazi: Ben Oko
IMelika: amazwe angama-22 - izixeko ezingama-85
Kuza kubakho intlanganiso yeQela leNkcazo kwizinga laseMelika yaseMatshi ngoMatshi kwi-sikhokelo seentlobo zolawulo olucetywayo apha.
Iqela loPhuhliso: uPablo Acevedo noGabriel Vergara.
Ngo-Ephreli we-2018 siye sabathatha inxaxheba kwi-World World yesiKwindla kwimeko yesiganeko seSpring of Alternatives.
Sasiqokelela idatha ye-40 enomdla (40).
Sithumele ii-imeyile ezininzi ngolwazi kunye nomnye umntu oceliwe ulwazi oluninzi kwaye wakhuthaza umdlalo wezentlalo obizwa ngokuba yi-CONSENSUS malunga nesisombululo seengxabano.
Sithumele iimemo kumacandelo okudlala kweso sixeko kunye nePeriscope Theater yavuma ukuthatha inxaxheba.
Isimemo kunye neendidi zokulungelelaniswa zithunyelwe kwiininzi zamaqela okuzithandela kuloo mzi.
Baye bathumela ii-imeyile kwimibutho emininzi yabafundi be-postsecondari ukuba bacele ukuba baxelele kwiimidiya zabo isimemo sokuba baququze imisebenzi kwimida yokuhamba.
Baye bathatha inxaxheba kuMatshi weLizwe lomhlaba ngesigidimi esingengobundlobongela kwendalo: ngaphandle kwemfazwe akukho zixhobo ezihlambelayo.
Bahambisa iiflaya phakathi kwabanye abathathi-nxaxheba.
Ukukhululwa kogcino kuququzelelwe ukucela izikhala kwaye ukumema ukulungiselela imisebenzi yokuhamba kwimiba.
NgoMgqibelo, i-27 / 4 iya kuphinda iqale kwi-Primavera de los Alternativas isiganeko ukujonga oonxibelelwano.
N.York, eLos Angeles. Ulwazi lu thunyelwe
Umvuzo kuMnu Luther King Washington. Hélène Park.
Ukufunyanwa kwe-S. General Jikelele we-UN e-N. York.
Umnyhadala "wokuNgqinwa kweManyano yeZizwe eziManyeneyo".
Isiganeko kumda wase-US Iingelosi zeMingcele zithatha inxaxheba kwiingxoxo ezininzi.
Umvuzo kwiSivumelwano seTlatelolco.
Isixeko, i-Antigua, i-Esquipulas. Mixco,
Njengoko iGuatemala ibonyulo jikelele ngenyanga kaJuni.
Ezinye izenzo zijolise ekulungiseleleni.
Kukho imbambano phakathi kwee-arhente zorhulumente, njenge-Tribunal Supreme Elections kunye neNkundla yoMgaqo-siseko kunye neSebe lezoBulungisa ekubhaleni kwabaviwa abaqhagamshelwe kumaqela okuthengisa iziyobisi.
Konke oku akuncedi ukwenza ngokukhululeka kwilungiselelo le-2ª yeHlabathi yeKharityhulam yoxolo kunye nokungabikho koBundlobongela kwilizwe.
Ukuhlanganiswa kweQela loPhuculo loMatshi ngoxolo noKhuselo.
Intsebenziswano phakathi kwabantu kunye nemibutho iye yakhuthazwa kwiindidi zokulungelelanisa ukuqinisa iqela lokukhuthaza.
Sinamacandelo ahlukeneyo amelwe
Imibutho yoLuntu, iDiverArte, Imibutho enxulumene noLuntu lweNxibelelwano.
Kwakhona, iMibutho yabafundi, kunye neYunivesithi kaZwelonke, u-Estudiantina weYunivesithi yeSan Carlos yaseGuatemala, oomasipala njengoMasipala waseMixco.
Ukuphononongwa kweentlobo zokulungelelaniswa kwendlela yeBakala leBakala
Ukutyelela kwiSebe laseQuetzaltenango (i-200 km ukusuka kwisixeko-dolophu) ukuvuselela oonxibelelwano ukuqinisekisa ukuhamba kweThimba leBakala kulo masipala.
KuMaspala waseChiquimula, oonxibelelwano baqaliswa kwakhona ukuze bavuselele izenzo, baphinde babuye, umzekelo iSikhumbuzo kwi-World March, eyakhiwe emnyango kuMasipala.
Isikhundla apho iqela lesiseko lizahlukana ukuya eSanta Rosa deCopan Honduras naseLa Paz, e-El Salvador.
Izenzo zokuphumeza emva komcimbi wokhetho
Imicimbi kumaziko emfundo, iMpawu zoxolo.
IiForam, uhlalutyo kunye neendawo zokuxoxa.
IQonga leNgingqi lihlelwe nguDiverArte.
Ukuhlanganiswa nokuhlaziywa kwamaxwebhu.
Ukuchongwa kwenkqubo yezomthetho evezwe yiGosa eliPhezulu laseGuatemala ukuba liqinisekise iSivumelwano seMiqathango yokuCandwa kweNyukliya.
SP Sula, iTegucigalpa, uPeña Blanca, iCopan, uP.Cortes, iSan Lorenzo.
Ukuqeqesha isikolo se-60 esiya kulawulo lokwakhela uphawu lwexolo, kunye nabantwana abasuka ezikolweni kummandla we-Honduras naseGuatemala, xa befumana i-2ª ye-World March.
Umbutho wabafundi bezonyango kwiyunivesithi kazwelonke UNAH kunye neyunivesithi ezizimeleyo ziququzelele i-2ª World March, ekutyeleleni kweMntla eMelika.
Oomasipala base-Omoa kunye neSan Pedro Sula, banquma ukuthatha inxaxheba kwi-2ª yeHlabathi ngoMatshi, ngokubambisana okukhulu kwabantu.
Ukuqhuba iintetho ezintathu zangexeshana kwiiyunivesithi zaseSan Pedro Sula ngezihloko eziphathelele uxolo lwehlabathi.
I-San Salvador, iSan Miguel, Mejicanos, iSanta Tecla.
Leon, Managua. Bafumana ulwazi.
Imibutho esebenza kwiQela eliPhambili loPhuhliso: Uguquko kwi-Violent Times Foundation, i-Friends for Peace Peace Centre.
Kwaye zongezwa, iCandelo loLwaphulo loLwaphulo loPhuhliso lwePolisa kaMasipala I-PAIN-V kwii-11 Izikolo kunye neeKholeji (kude kube ngoku).
Iingxoxo zoTitshala kunye nabaFundi.
Imisebenzi yobugcisa kunye nemiqondiso yabantu kwiSuku loKhuseleko lweZizwe ngezizwe 21 / 9.
Ukubhiyozelwa kwimihla ye-2 / 10 yokungabikho kobundlobongela nokuhamba kweMatshi yehlabathi yesiBili.
Ingxelo yenkcubeko yenkcubeko ye-World World yesiKwindla nguRhulumente
Imisebenzi Ngethuba lokudlula kwi-World World Second March.
Iforum yamazwe jikelele kwi "Indima yemikhosi ngekhulu le-XXI". (Ilinde ukuvunywa kukarhulumente).
Imisebenzi kunye ne-1000 abantwana kwi-esplanade ye-Museum Museum. (Ukucwangcisa).
Ikhontrakthi yoxolo eParque de la Democracia. (Ukucwangcisa).
Imiqondiso yabantu kunye nabafundi, kumaziko ahlukeneyo emfundo nakwiipaki kwezinye iidolophu. (Ukucwangcisa).
Ukuthatha inxaxheba kwiinkqubo eziliqela kunye nodliwano-ndlebe, i-Radio kunye neTV. (Ukucwangcisa).
Ulungelelaniso lwe-EPP kunye neentlanganiso rhoqo ngeentsuku ezimbini ngeLwesithathu kwi-CAP ukusuka kwi-5p.m.
E-Panama, i-World Without Wars kunye ne-Violence account yaseBelkis de Gracia, kunyaka odlulileyo ibambe iqonga kwiYunivesithi yase-Interamerican yasePanama.
Phakathi kokuphela kukaSeptemba kunye nokuqala kuka-Oktobha walo nyaka, siza kubamba iqonga kwiyunivesithi yendawo (indawo, umhla kunye nexesha lokuqinisekiswa).
Izithethi ziyamenywa ukuba zithathe inxaxheba kwiForum: "Inkcubeko yoxolo, ukungabinogonyamelo, ukuhlonipha abantwana kunye nemvelo yePanama" Baza kwabelana nathi ngolwazi malunga nemvelaphi kunye nolwazi abaluthathela ingqalelo malunga noko kuye kwenziwa ngumuntu kunye neminye imirhumo malunga neentlobo zonxibelelaniso.
Qhubeka usebenza kunye nezikolo ze-40 ezazisinceda eMatshi yaseMzantsi Melika. Iingxoxo zobudlelwane obungabonakaliyo, ubudlova, imidwebo ekubhekiselele kumxholo, iphakamise ifulegi, amabali kunye nemibhalo, iimpawu zokuxolo kwicandelo kunye nokuhamba.
Isimboli soxolo siya kulungiswa kwi-Plaza de Bolívar emema abantu be-5000.
Ukufezekiswa kwekhonsathi enkulu yoxolo kunye nokungabikho gonyamelo.
IBarrancabermeja (E. uMgqugquzeli ophethe u-Anthony noMelba)
INgqungquthela yase-Unipaz (iYunivesithi) ne-SENA.
Ukuhamba ngokubanzi ngedolophu iqokelela abantu be-2000.
Uqhagamshelwano luya kwenziwa kunye namalungelo oluntu abasebenzisayo kwimigangatho yokuqala kwaye bavale kunye nophawu olukhulu loxolo.
Mema ilungu leQela leBakala ukuba bathathe inxaxheba kwi-B / ca kwinkomfa nakwimpawu.
Kubalulekile ukuqinisekisa imihla.
UMedellín (E. Umkhuthazi ophetheyo u-Elex noGloria)
I-Carnival yenkcubeko: zonke ii-communes zehlela eMedellín kwi-comparsas ukuya kumgca odlula edolophini.
Uthetha kwiyunivesithi malunga noxolo kunye nokungabikho gonyamelo.
Qhagamshelana namaziko karhulumente, uxanduva lweeLungelo leLuntu kunye nolunxulumene nalo.
I-Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-i-Armenia-Neiva (iidolophu ze10)
Kuzo, ukuhamba kunye nemiqondiso yoxolo iya kubanjwa kwisixeko ngasinye.
Uthetha ngokungahambisani nobundlobongela kwiiyunivesithi kunye neziko.
KwiBarrancabermeja, iququzelelwe ukuba omnye okanye abantu ababini be-EB bathathe inxaxheba kwimisebenzi yesixeko kunye neKolobri Park.
U-Andrés Salazar noMarly Arévalo bafuna ukuziphakamisa njengenxalenye ye-EB ephuma eMadrid-Spain.
Siza kwenza izikipa, iibhanile, iibhanile, iileta eziya kumaqumrhu, iiyunivesithi kunye neekholeji kunye nezinto eziyimfuneko ukusasaza uMatshi weSibini weHlabathi.
Kukho uqhagamshelwano kunye namaziko karhulumente, amaLungelo oluntu, iziseko kunye namaziko ahambelana nesishukumisela esifanayo sokuxhatshazwa kunye nobudlova.
Quito, Guayaquil, iManta
Ngokubhekiselele kwimeko yokufumana iQela eliSeko leMatshi ngoMatshi kukho izixeko ze-2.
Guayaquil kunye nokuthatha inxaxheba kwiintlobo zoqhagamshelwano
Iiyunivesithi: U. de Guayaquil kunye no-U. Casa Grande.
Ulwaphulo lwamacandelo ezemidlalo yolutsha.
Ezinye izikolo kunye noMasipala waseGuayaquil.
Ibhentshi nale mi sebenzi
Ukulungelelaniswa nePan-American Roundtable.
Ecuador-Manta: Ukwamkelwa kwisixeko saseManta-Ecuador ngokuvalwa kwesiseko somkhosi.
Nantsi eVenezuela, ukunxibelelana, ngeefowuni nakwi-intanethi, ngokubanzi, kubangelwa kwisigqeba sombhikisho, esingaqinisekanga.
"Ngokomzekelo"Khankanya umngeneleli wethu,"Ndineeveki ezimbini ngaphandle kokunxibelelana kweseli, okanye i-WhatsApp. Kwaye baninzi abantu".
Nangona kunjalo, silindele, nangona singenzi nto. Kukho ingxolo eninzi ngombandela wezopolitiko kazwelonke nakwamanye amazwe.
Paramaribo Bafumana ulwazi.
Iqela lophromotha: Gunther A., ​​Marcos R., uJobana M., uRégis M., uRosana B. kunye noVinícius P., uRosana B. noFernando P.
Sasivavanya ukuba umkhangeli wokuqala waba negalelo elikhulu kumajelo eendaba, ukuququzelela okukhulu eBahia nasePernambuco.
Abantu abangaphezu kwe-3 abantu baqhagamshelana newebhu kunye nezonxibelelwano zentlalo kuloo mzuzu.
Uninzi lwabafowunelwa luye lwaqalisa ukususela ekuhambeni kwe-South American kwi-2018.
Kulo matshato wesibili siya kubeka phambili umsebenzi kunye neempawu zokuxolo ezikolweni nakwiziganeko kunye neenkundla zokungabi nonyanzelo.
Iqela loPhuculo lweNgingqi
Kuze kube ngoku siye saba namaqela okukhuthaza abantu kwi-2ª World March kwizixeko ze-5.
Imisebenzi iqinisekiswa kwi-Recife, eMinas, eSão Paulo, eCubatão naseCaucaia.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba uCuritiba kunye neRio Grande do Sul banemisebenzi.
Sixhasa yaye ukuzibophelela izithuba ze-Iziko leeNkcubeko of São Paulo, ka UMAPAZ (Universidade Livre ukwenza Meio Ambiente e da Paz) kunye neSebe leMfundo wooNobhala Cotia kunye Pernambuco imisebenzi xa umthambo kunye nezikolo.
Amaziko ahlukeneyo aqhagamshelana nawo, njenge: Izikolo, iiYunivesithi kunye nabaNobhala bezeMfundo.
Isixeko ngasinye siya kuba nesenzo esahlukileyo.
Iinkcukacha kufuneka zicaciswe kwisixeko ngasinye.
E San Paulo wathetha malunga ngokwenza isiganeko kwiZiko yezeNkcubeko Cubatão Yingcinga Nokuthula 300 alumnos.La central indlela wayeza Recife Kuqikelelwa ukuba 03 07 imini kuDisemba, Sao Paulo 8 11 ukuba / dec., Paraisópolis / 12 14 ukuya kwiintsuku Minas / dec., 15 ukuya 18 Caucaia / dic.Este lilinge ishedyuli lokuqala kufuneka ukuba naphaya, uyakwazi ukutshintsha imizi, iindawo, imihla namaxesha.
Siceba ukwenza amashishini abafundi aphelile ngeempawu zokuxolo ezikolweni, iigyms okanye iibhola ezincinci zebhola.
Ukusuka Oktobha 2 siza sicebisa iintlobo ezininzi zoququzelelo kwiqela zemidlalo, ezentlalo kunye nemibutho yenkolo phambi kokuba aqale ukwenza imisebenzi iqela lokugqibela, yaye, apho kunokwenzeka, ziquka iindlela ziyahlangana.
E-São Paulo ezinye izithunywa zazingumfanekiso wokwenza umboniso kunye nenkomfa e-Umapaz.
Pressenza nesicwangciso 4V ukwenza uthotho video kunye neenkqubo ukuba kusasazwe ingxelo yenkqubela rhoqo ngeveki Ukuhlangabezana kwiinkcubeko marcha.La uceba ukwenza iziganeko yenkcubeko kunye nabafazi ovela kwelinye ilizwe, umculo kunye / okanye ubukho kakhulu kwi March of the zocweyo Inmigrantes.En Recife kweekhosi zoqeqesho abafundi nootitshala baya kwenziwa rede yoluntu.
Inkxaso yeziko: Kuze kube ngoku, kugxininise ngakumbi kubathintana nabanobhala bezemfundo, amagumbi omasipala kunye neeyunivesithi.
Iindibano zeNtlalo kunye neMibutho eyaBambisana kunye neNkxaso
Sinoqhagamshelwano nemibutho kunye nokunyakaza okuye kwaxhasa i-1ª World March eBrazil, njenge-Pólis Institute, Sou da Paz, Soka Gakkai, Unipaz nabanye abaninzi.
Abanye babo sele bajoyine imisebenzi yoMatshi waseMzantsi Melika eyenziwa kwi-2018.
Asikabikho ixesha lokungena kule miba, kodwa sinokuhlala okuzinzile kunye nezixhobo zevidiyo ze-4V ezinokubambisa iziganeko, kunye nokudluliselwa kweminye yazo.
Imidiya kunye nokusabalalisa
Sinento uluhlu eendaba ukuba uthumele amanqaku kumaphephandaba, 6 okanye 7 amaqabane unxibelelwano eendaba, kodwa kwakusekho kuba iqela ababhali neendaba yaphandle kwaye zithumele nge frequency ethile.
Siza kuba nokubhala kwe-Pressenza kwi-SP kunye ne-4V yokufunda njengenkxaso yokuxhasa izinto zokulungisa kwiindidi zokulungelelanisa
Kubalulekile ukuvuselela amanethiwekhi e-2ªMarcha Mundial Facebook, Twitter, Instagram, web, telegram, njl.
Iimpawu zokungabikho koLuntu kunye noXolo kwizikali ezahlukeneyo
Okwangoku kukho izixeko ezimbini ezihlose ukwenza oku: Cubatão e Cotia.
Sidibana nezinye izikolo kwaye sizimisele ukwenza izinto ezicacileyo ngesiPutukezi.
Ukuhlangula iminikelo yoxolo kunye nokungabi nonyango olufanelekileyo kwilizwe
Ekuqaleni sasitshintshana malunga neminikelo kaPaul Freire, uMaria da Penha, u-Augusto Boal, uChico Mendes noMarielle Franco.
Nika ukubonakala kwimibango kunye namava anomdla othile kwilizwe
Okwangoku eBrazil beqine kunene umba wobundlobongela amapolisa imfazwe kweziyobisi, ku hlamusela ungenelelo kwiindawo ezihluphekileyo yaye ingcinezelo ka uqhankqalazo zabo, ukuvalelwa abaninzi, decontrol iingalo ekuthwaleni, ubundlobongela ngokwesini, ekhula ndikuthiyile intetho, abe libanjwa okanye abe nokumangalela ntliziyo ezopolitiko kunye abachasi kukarhulumente kunye kubulawe abantu abamnyama kwimida kunye zomthonyama endle.
Iimbono ezinamandla kunye nezihloko ezimele ziqiniswe kwilizwe ngokwemiqathango yazo
Uqoqosho kunye nokuzixhasa ngemali
Asisakwazi ukuchaza iinkcukacha zebhajethi ye-Matshi eBrazil, siya kuqala ukwenza ngoMeyi.
Siye sathetha malunga nomkhankaso we-crowdfunding campaign.
Imiba, izenzo okanye iingxabano ezinokunyuka okanye zineempembelelo kwizinga lesithili okanye lehlabathi: Intsebenziswano yaseBrazil kunye ne-Israel, ukuthenga izixhobo.
Kwaye ukuhanjiswa kwenkxaso yomkhosi we-Alcantara kwi-USA.
Tumbes, Piura, Lambayeque (abantu abasuka eChachapoyas kunye Yurimaguas), Trujillo, Huaraz, Lima (izixeko 15).
Iqela lePromo lasePeru lakhiwa nguCarlos Degregori, uLuis Mora, uMariela Lerzundi kunye noRiccardo Marinai.
Umzila we-EB uya kuba yindlela eya kuzo zonke izixeko. Kungenzeka ukuba ihlulwe ngamaqela amaninzi.
Oomasipala (UMagdalena, Surco, Miraflores), Ministry of Education Cañete (amaqela 300 izikolo), College of zengqondo of Peru, Abaseki benamathele Cities, Universities (Ricardo Palma: Casa de la Cultura Korihuasi, National nakwimiVo Toribio Rodriguez de Mendoza, Inkolo Cesar Vallejo) School of Tourism of the National University of Tumbes, Piura Task Group, Regional Government of Lambayeque, Ofisi yoMmandla of Education of Arequipa, nabantu Ootitshala Network Group Culture Yurimaguas.
Izinto: Kuphuhliso: izibonda, amabhanki, amabhanki, iidibhoni, izitampu, iincwadana, iiflaya, amaqabunga.
Qaphela: Sineziphakamisi kwisixeko ngasinye. Sincoma iintlobo ezahlukeneyo zoqhagamshelwano ukukhuthaza imisebenzi kwinqanaba ngalinye. Sinendawo kwindawo eLima, enikezelwe yiYunivesithi yaseRicardo Palma.
Imisebenzi yayigxininiswe ngokushicilela nokuhanjiswa kweencwadi zokumema kwizikolo zasesekondari neziprayimari kwindawo yaseSopocachi yaseLa Paz. Ukuqala ngoJulayi, iza kubakho oomasifundisane kunye nabafundi abavela kwindawo enye.
Iinkcukacha zezinto ezenziwayo azikho.
Isiko soFundo lweSilo saqala ngokusasazwa kwemisebenzi ye-World March. baya kuqalisa imisebenzi yokufikelela ngoJulayi.
Kukwinqanaba lokuqala lombutho, kunye nabakhuthazi kumaphondo e-8: uSalta, kutshanje kwiCABA (isiXeko sase-Bon.
Imisebenzi yokusabalalisa eParque Lezama, iPhondo leBuenos Aires kunye neCABA; Bonke abanye ngumsebenzi wokuthintana kunye nokukhangela ukufikeleleka.
Kuya kubakho iziganeko ezibini ezinkulu kwilizwe
Ukwamkelwa koomama kunye nogogokazi bePlaza de Mayo njengemibonakaliso yomzabalazo ongeyomthetho.
Intlawulo kwiSilo. Bobabini kwinkqubo yentlangano
Sine-Adhesion yoBulungiseleli bezeMfundo eCórdoba kwaye ukuvakaliswa komdla wePhondo kusenziwa.
Kucwangciswe isenzo esincinci sokuhanjiswa kwencwadi ye-Matshi yoMzantsi Merika, eMilagros Sala eJujuy.
Saqhagamshelana nama-ambassasi aseCuba, eVenezuela naseBolivia eBuenos Aires, kwaye sithatha inxaxheba kwizenzo zobumbano nabantu baseVenezuela baseCordoba.
Ukudibanisa-Ukuqatshelwa koMama kunye nogogo kaMeyi eArgentina.
Ukudumisa kuMario R. Cobos -Silo ngegalelo lakhe kwinto engenalo ubundlobongela.
P. de Vacas: 2 / 1 / 2020 10º engama yokubhiyozela World 1ªMarcha.
Baqala ukuba neentlanganiso malunga neendidi zokudibanisa.
Banomdla kwindlela yokukhula nabantu abatsha abadibeneyo kwimisebenzi.
Baceba ukutyelela yonke imimandla yaseChile ukuphakamisa le ngxaki yokukhuthaza amaqela angamaqela.
Baya kuxhasa ngenkxaso yemveliso yazo zonke iintlobo ezibandakanya iintlobo zentlangano kunye nezenzo.
Injongo kukudibanisa abantu ukuba bakwazi ukuqhubela phambili kwi-World March kwiingxelo ezilandelayo.
Chile kwakhona ukunyusa inkxaso TPAN (iSivumelwano Ukuthintelwa Izixhobo Nuclear) sele phambili nayo ngoku amalungu epalamente kwanda ukuya koomasipala.
Baya kuthatha isenzo kwiqela lezenzululwazi eziphuhlisa iinkqubo zophando.
I-Oceania-Australia-iAsia: amazwe asi-7 kwiidolophu ezili-17
Phinda udibanise kunye noonxibelelwano lwe-1ª ye-World World.
Ukuqwalaselwa kweNew Zealand njengelizwe le-weapon-free-weapon.
Imibhiyozo ye-10º Isibhengezo se-1ª Yehlabathi ngoMatshi.
Sydney: Umsebenzi uqhubeka ekuhleleni intlanganiso malunga ne-WM eSydney.
Ukuqwalasela indlela yokuqhuba isenzo elunxwemeni kwi-WM ukudlula, njenge-IWM. I-Decler ijongene neQela loPhuculo.
Siza kuxoxisana nabo kunye noonxibelelwano lwe-1ª World March
U-Nailesh waya eJapan waza wenza ezinye idibaniselwano kwiyunivesithi.
Baye benza usebenze oonxibelelwano beeMeya ngoxolo, i-ICAN kunye ne-1ª ye-World March.
Intlawulo kumaxhoba aseHiroshima naseNagasaki eJapan.
Sifanele sixoxe kwakhona kunye noonxibelelwano lwe-1ª World March.
Uhlu lweeKorea ezimbini
Sifanele sixhumane kunye neefowuni ze-1ª ye-World World.
Isiganeko emngceleni waseKorea naseMntla Korea.
Uya kuqhagamshelana nawe. Kuyathakazelisa ukuba i-2ª World World ihamba ngeChina.
Kukhona injongo yokuqhagamshelana nalabo abathathe inxaxheba kwi-1ª ye-World World
Umsebenzi weTulsi Sigdel kunye noKhabir Ranjit njengabaxhumanisi. Ngokubambisana ne-3 Nepali enye iya kuba eMadrid i-2 ka-Oktobha 2019.
UMagaj Bd Panthi noSharada Prashad Dhital bafuna ukwenza iMadrid e-Afrika indlela njenge-EB.
Baya izicwangciso 5 kunye 10 phakathi Nepalis ukuya Madrid ekupheleni Yehlabathi Matshi 8 / 3 / 2020.
E-Nepal siza kuququzelela iNkundla yeSizwe yoLuntu.
Sisebenza kwiProgram yeSizwe yeSizwe ka-Matshi ezikolweni, kwiiyunivesithi kunye nemibutho ukuba ithathe inxaxheba.
Siyabona impendulo enokubakho ngokubhekiselele kwiintlobo zolawulo olucetywayo.
Siceba ukwenza le mi sebenzi eNepal
Iintlanganiso zezinga leYunivesithi eK Kathmandu, eBanepa, ePanauti, eBiratnagar.
Kuya kuba neengxoxo phakathi kwesikolo eK Kathmandu naseKavre.
Iforum ye-Humanist (phakathi kwe-50 imibutho eye yanquma umdla wakho).
Cacisa ngaphambi kwenyanga ye-1 imisebenzi yeqela lesiseko e-Nepal.
Ukuhlaziywa kwexesha eliqhelekileyo kwi-Second World March imisebenzi kwiphephandaba leNational News kunye neentsuku zonke zeentsuku ze-15.
Incwadana kunye neBhanner yeHlabathi ngoMatshi ngo-Nepali nesiNgesi.
Imisebenzi yeQela leBakala leZibini zeNhlaba ngoMatshi ngo-Nepal
Usuku loku-1 Iqela leSiseko lifika eNepal. Ingxoxo efundisayo kunye nokuphumla.
Usuku 2-Matshi-Mhlaba ePanauti, 9:00 ukuya ku-11: 00, isidlo sasemini, ukuqala ngo-1: 00 kuye ku-3: 00 kwintlanganiso yeholo kamasipala waseBanepa. (Buyela kuKathmandu)
Iqela leBakala liya kuhamba kwenye idolophu xa kunokwenzeka.
Sithemba ukuqonda umkhangeli eBiratnagar kunye namanye amathuba kwiidolophu ezifana neBhaktapur neKirtipur.
Usuku lwesi-3-Matshi weHlabathi kwiDolophu yaseKathamandu kwiSixeko okanye kwiSizwe.
Bathemba i-500 kubantu be-700 abavela kuzo zonke iziko (isikolo, eyunivesithi kunye nemibutho).
Usuku 4 - INkomfa yeSizwe (unethuba lokuba seLumbini ngezipho ezivela kumaphepha-ndaba esizwe).
Siza kufunda ukuba kunokwenzeka ukuba wenze umkhondo kwiinkampu ze-Sagarmatha (Everest).
Ngomhla we-5-Qhubeka nohambo oluya eN. Delhi-India.
Kuya kuba kuhle kakhulu ukuba i-Sudhir ne-Nailesh ibambe iqhaza kwiQela le-Base eNepal
Kananjalo naseNepal siza kuba nomdla wokudibanisa neQela leBakala eNdiya.
Sikulungele ukubonelela ukulala kunye nokutya ngokuthuthwa kwamalungu eSebe leBakala.
Tulsi Sigdel / i-Kabir Ranjit abaququzeleli baseNepal
Saqala lo msebenzi ngokwenza uphawu loxolo kwisikolo saseKannur kunye namakhulu abafundi, kwaye ootitshala besikolo nabo bathatha inxaxheba.
Isangqa sihamba kunye nengoma ethi "Siza koyisa ..." eculwa liqela labafundi.
Siguqulela izixhobo zethu ezisemthethweni kulwimi 'lweMalayalam'. Ndenze imibala yeprinta yencwadana.
Enye into ebalulekileyo yayiyiQela loPhuculo kwiSithili saseJannie. Ukuthatha inxaxheba kwakulungile kwaye kunomdla.
Uthathe inxaxheba kuzo zonke iintlanganiso zamazwe ngamazwe kwiindidi zoqhagamshelwano.
Vumela ulwimi lwethu "iMalayalam" luvele kwisiza samazwe aphesheya.
Ukuba izinto zethu neziganeko ziyakwazi ukulayishwa kwiwebhusayithi.
Siza kuqhagamshelana nezikolo kunye neekholeji. Abahlobo be-NSS 15,000 baya kujoyina i-2WM (Imibutho ephefumlelwe nguGandhi kunye nabantu abavela kwimibutho yonqulo).
Uqhagamshelwano lwenziwa eMumbai kunye ne-Ekta Parishad.
Ekta Parishad. Ukususela kwiindidi zokuhlanganisana ngamazwe ngamazwe e-2ª World March udibana no-Ekta Parishad kunye nabaququzeleli be-Jai Jagat.
Sinesivumelwano sentlobo yentsebenziswano. Baya kuxhasa i-2 World March ngomhla weNdiya kwaye siya kubaxhasa eYurophu.
Amanqaku entsebenziswano kwiindidi zoqhagamshelwano kufuneka achazwe ngokubanzi.
Isiganeko eNew Delhi i-30 / 1 / 2020: isikhumbuzo sokufa kukaGandhi.
IYurophu: amazwe angama-29 - izixeko ezingama-57
NgoFebruwari uSandro waya kwiFriedenkonferenz eMunich ukuyokwazisa nge-2 kaMatshi ngeHlabathi kwaye siququzelela umsitho odumileyo eMunich nge-23 kaMeyi ukuzama ukubhengeza uMhla we-2 kaMatshi kwakhona.
Imbono kukuba uMatshi weSibini weHlabathi ahambelana ne- "Friedenskonferenz", nge-14 kaFebruwari.
Iziganeko zaseJamani zingaba phakathi kwe-12 kunye ne-14 ngoFebruwari.
I-12 ingafika eBerlin, ize iqhubeke neLeipzig (?) Okanye i-Frankfurt (?) Kunye ne-14 ukuya eMunich. USandro, uMonica noHarald yibo abahamba ukusuka eMunich.
Bafuna ukuba ngubani onokusebenza eBerlin.
Sifuna ukwazi ukuba ngaba kuya kubakho i-WILPF okanye i-ICAN eJamani.
Sihlose ukudala iqela labantu abathile be-20 eJamani abanokuphakamisa nokulungiselela iziganeko.
Namathisela uluhlu lwezonxibelelwano ze-7 eziqokelelwe ngexesha loFriedenskonferenz:
Kufuneka usebenze oonxibelelwano.
Ulwazi luyakuthunyelwa kwiintlobo zoqhagamshelwano.
Ukutyelela kwiPalamente yaseYurophu.
Intlawulo kumaxhoba aseYpres Emangcwabeni.
EBordeaux, i-ACDN eqokelelweyo (iSenzo seCitizen for Disarmament Disarmament) sinomdla ekuthatheni inxaxheba kule projekthi.
Emva kokuthatha inxaxheba kukaRafa kwiintlanganiso Jai Jagat Yurophu, e-Lyon, unxibelelwano olufanelekileyo luye lwasungulwa kunye ne-MAN (Movement pour un Alternative Nonviolente).
Kukho, e-Nice, oonxibelelwano oluqhubekayo kunye namaqela amaninzi ukulungiselela umboniso.
E-Ivry sur Seine, kwingingqi yaseParis, oonxibelelwano oluqhubekayo nomasipala.
Iprojekthi yoMyalezo ohlangeneyo weSilo "Gravis ton ton sommet"Ukusuka eToulouse, ucinga ukubandakanywa ngoMatshi, kunye nabadali abayi-1001 badibeneyo bemfundo eyonwabisayo kunye ne-Femmes Internationales, indibano ye-mur brisé (FIMB) yenethiwekhi.
Geneva Ulwazi luyakuthunyelwa kwiintlobo zoqhagamshelwano. Kukho oonxibelelwano noJai Jagat Switzerland.
E-Athene kukho intlanganiso yokuqala ye-2 World March kunye nabantu be-50.
Bawuguqulela incwadana enesiGrike.
Iidolophu zaseTesteste, Vicenza, Brescia, Alto Verbano - Varese, Milan, Turin, Genoa, Ventimiglia, Florence, Perugia-Assisi, Livorno, Roma, Cagliari, Avellino, Naples, Reggio Calabria, Palermo uthatha inxaxheba.
Sizakuzama ukugubungela izixeko ze-1 World March kunye nabanye.
Sicebisa zahlulwe zibe mbini EB esiza Italy Trieste 26 / 2 / 2020 (Trieste na izibuko zenyukliya kufuphi isiseko kwezixhobo zenyukliya Aviano Air Force 40)
Ukuqala e-Trieste - Vicenza (kwikomkhulu lomkhosi wase-US Ederle nase-AFROM) -Brescia (kufutshane ne-Ghedi Air Force Base enezixhobo ezingama-20) -Alto Verbano - eVarese - eMilan - eTurin-Genoa (ukuphuma e-Itali 3/3/2020 ukuya I-Ventimiglia-Nizza)
Umntla weNyakatho yeNtshona
Uqala e-Trieste - eFlorence - ePerugia - e-Assisi - eLivorno (izibuko lenyukliya, kufutshane nekomkhulu lomkhosi wase-US Camp Darby) - iRoma-Cagliari (eyona ndawo inkulu yokudubula komkhosi eYurophu) - iAvellino-Naples (izibuko lenyukliya usuka kwi-NATO) -uRegio Calabria -Palermo (ukumka ngo-3/3/2020 ukuya e-Barcelona).
Enye indlela ekhoyo yokuguqula
I-Puglia - Brindisi (ichweba lenyukliya) kwi-Mbindi Mpuma (Lebhanon) -Cyprus (indawo ekunokwenzeka ukuba ibe kwiGreen Line) -Ithathwa ukuba iyaqhubeka na iGrisi kunye neeBalkan apho azakudibana khona neQela leHlabathi eliseRijeka (eCroatia), kwiDolophu enkulu Inkcubeko yaseYurophu 2020 okanye ungene eSpain.
Sizama ukufaka isandla kwi-Italy ukuze sifumane iqhaza kwiQela leBakala ukwenzela ukugqithisa umendo ophakanyisiweyo ngokupheleleyo (kwaye kungekhona kuphela).
Kwisakhelo sehlabathi lesibini nge-Matshi sikhuthaza iphulo “lweMeditera, Ulwandle loxolo”.
Ekupheleni kuka-Oktobha, isikhephe uya bachukumise Genoa kunye naseNice, eBarcelona, ​​Tunis, Palermo, Reggio eCalabria, Cagliari, Livorno kunye neziganeko ziza kuququzelelwa kwi Museums loLwandle izixeko ezahlukahlukeneyo.
Iintlanganiso ziye zabanjwa kunye noNobhala weSizwe weVatican ezijongene neziphakamiso ezintathu kwicala lethu:
IMeditera: uLwandle loxolo.
Uhambo loXolo lweNtshonalanga lweMeditera luphela eGenoa oluzodlula eCivitavecchia luyise eVietnam (okanye kwiindawo zalo eRoma) umboniso "Wentyatyambo yobuhle bolwandle", umboniso weefoto kumgangatho osemazantsi oLwandle iMeditera.
Umboniso wakho uya kuba nethuba lokudibanisa intlanganiso ngokubhekiselele kwimvelo yabantu baseMeditera.
Kuya kuba sisiganeko ukususela ekupheleni kukaOktobha ukuya ekuqaleni kukaNovemba ka-2019.
Kuya kubakho ukubingelela iqela labantu Base Team ezihamba kwihlabathi yaye oko kunokwenzeka ukuba enze uphawu yabantu uxolo and non-ubundlobongela ngabantu abatsha abasuka kwiindawo ezahlukeneyo.
Ngobukho beendwendwe, apho iindawo ezincinci ziza kuthatha inxaxheba. Usuku olulindelekileyo: ekupheleni kukaFebruwari / 2020.
Ingqungquthela engapheliyo kwiinkomfa ezinxamnye nemfazwe kunye nokungabikho gonyamelo
Second World Matshi endleleni yabo yokufumana izinto ezahlukeneyo yehlabathi kunye nezenkolo, ukuqokelela amava, nezingqino kunye nabantu ukuhlangana entwasahlobo ka 2020 eVatican.
Kungaba ithuba lokukwazi loo manani ngokubhekiselele kungengobundlobongela abangayiphulaphulelanga okanye bengayinaki into engeyonto enobudlova, njengoYesu.
Ekupheleni kuka-Agasti we-2019, kunye namanye amaqela kunye noluntu
Wena nonokudala ixesha zifunyanwe uBawo oyiNgcwele (Pope Francis), aya kuhlangana ithimba (umda) nenokuthi ukunika umyalezo wendlela.
Sithumele incwadi ebhaliweyo kuNobhala weSizwe ukucacisa iintlobo zokucebisa izilungiso
Ukwamkelwa kunye noPapa.
INgqungquthela yamazwe ngamazwe ngokungahambisani nodlova kunye nenkolo
Madrid 6 / 3 Ukwamkelwa kweziko.
I-Madrid 7 / 3 Ikhonkco yokuvala ye-World World Second.
Kwaye iMadrid 8 / 3 ijoyina umboniso we-8 / 3 Day Day Women.
Kubalulekile ukuxhuma kwakhona, ulwazi luhanjiswe okanye lufumana oonxibelelwano kumazwe alandelayo:
Ukumiselwa kweFinland, eSweden, eDenmark, ePoland, eCzech Republic, eRomania, e-Austria, e-Luxembourg
Izinto eziphathekayo ukuququzelela iintlobo zokulungelelanisa umhlaba kunye neminye imiba
Sisele sisebenzise le website https://theworldmarch.org
Ngokubhekiselele kwiilwimi, siyacela ukukhangela izinga lokuguqulela olwenziwa ngeelwimi ezahlukeneyo.
Kukho ubungqina bokuba amaxwebhu abalulekileyo kwiwebhu ngeenguqulelo zengcali ezimele zenziwe ngolwimi ngalunye.
IsiBhulu, isiAlbania, isi-Amharic, isi-Arabhu, isiArmenian, isi-Azerbaijani, isiBasque, isi-Belarusian, isiBengali, isiBosnia, isiBulgaria.
IsiCatalan, isiCebuano, isiChechea, isiTshayina (esilula), isiTshayina (saseKapa), isiKorea, isiCorsican, isiCroatia, isiCzech, isiDanish, isiDatshi.
IsiNgesi, isi-Esperanto, isi-Estonian, isi-Euskera.
IsiPhilippines, isiFinnish, isiFrentshi, isiRisiya, isiGalician, isiGeorgia, isiJamani, isiGrike, isiGujarati.
IsiCreole saseHaiti, isiHausa, isiHawaii, isiHebhere, isiHindi, isiHmong, isiHungary.
Isi-Icelandic, isi-Igbo, isi-Indonesian, isiIreland, isiNtaliyane, isiJapane, isiJavanese.
Xhosa, Latin, Latvia, Lithuanian, Luxembourgish.
IsiMacedonia, isiMalagasy, isiMalay, isiMalayalam, isiMaltese, isiMori, isiMarathi, isiMongolia, isiMyanmar (isiBurma).
IsiNepali, isiNorway, isiDatshi.
Xhosa, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian.
IsiSamoa, isiScottish Gaelic, isiSerbia, isiSuthu, isiShona, iSindhi, iSinhala, iSlovak, isiSlovenia, isiSomalia, isiSpanish, iSudanese, isiSwahili, iSweden.
IsiTajik, isiTamil, isiTelugu, isiThai, isiTurkey, isi-Ukrainian, isi-Urdu, isi-Uzbek, isiVietnam, isiWelsh, isiXhosa, isiYiddish, isiYoruba, isiZulu.
Sifeza isigaba esiphezulu sewebhu. Emva kokugqiba eli nqanaba siya kusebenza kwisihloko seRRSS.
Izifundo ziya kuphuhliswa ngabo babambisana ekulayeleni ulwazi.
Lewebhu yenzelwe ukuba amacandelo anokwenziwa ngamazwe, kuquka imizi ngaloo ndlela ukuququzelela iintlobo zoqhagamshelwano kwimimandla eyahlukileyo.
Sineqela lokuxhasa ibandla kunye nomxholo wewebhu. Siyamema amaqela anomdla ukuba athathe inxaxheba.
Sijolise ekusebenziseni kwaye senze ibe namandla ngakumbi.
Sinezixhobo zeenkcukacha ze-4 kwi-World World Second ngoMatshi kwiTelegram ukwazisa.
Kukho imiba ebalulekileyo kwaye imbali yento yonke eyenzeka ukususela ekuqaleni igcinwa, ibonakala nakwabatsha abajoyina iseshini.
Baya kuba ngabalawuli abaningana ngeelwimi.
Sincoma ukudala iqela kwilizwekazi ngalinye ngolwazi olukhawulezayo nolukhoyo (umz. Sele basebenze eYurophu nakwi-Matshi yaseMzantsi Melika).
Isikhokelo sokusetyenziswa kweqela siya kulungiswa ukwenzela ukuba isebenze kwaye sijonge ukuba asizalwanga, sizenze i-modyuli kunye nemithetho elula kunye ne-1 okanye abalawuli be-2 ngelizwe.
Sizama ukuqinisa iiprofayili esinayo kwi-World March kwi-Facebook kunye nokungeniswa kokungeniswa kolunye unxibelelwano, ukuze kuveliswe ukulungelelanisa ngokusebenzisa indawo ekhethekileyo eyona nto inceda ekuphuhliseni iintlobo zoqhagamshelwano.
Oku kuya kuvumela ukuba iziganeko ezithile zingabizwa kwiindawo zabo kunye neelwimi.
Siza kuba ne-Instagram channel kwisiNgesi ukuxhobisa izizukulwana ezitsha.
Izinto eziphathekayo: Sine ncwadana ngesiSpanish indlela yokuguqulela kwezinye iilwimi.
Ukubonakaliswa kufuneka sicinge ukuba inguqulelo entsha iya kwenziwa ngoMeyi / 2019.
Intlanganiso elandelayo elandelayo ukuxoxa ngale ndlela ilandelayo yokulungelelanisa umhlaba jikelele
Siceba ukubamba intlanganiso yehlabathi elandelayo ngoJuni.
izigaba Iincwadana Ukuhamba kwetikiti
IJersey yaseNew Jersey yoNqandelelo lweZixhobo zeNyukliya
ULwandle lweMeditera loXolo luya kuba lunye lweexeshana ze-2ª World March